Date My Pet » Mitandrema ianareo, fandrao ny hahatongavany ho matihanina Online Dater
Last nohavaozina: Nov. 22 2020 | 3 min namaky
Isan-taona, ana hetsiny ny olona mahita ny "tonga lafatra lalao’ amin'ny alalan'ny asa fiarahana amin'ny aterineto. Ary an-jatony isan-taona an'arivony maro kivy tamin'ny zavatra niainany. Ny iray amin'ireo mahatonga an 'ireo izay manana olana amin'ny fiarahana amin'ny Internet dia ny firongatry ny' matihanina amin'ny aterineto dater ', ny teny hoe namorona ny Online Dating Magazine mba hilazana ny olona izay miasa matotra amin'ny fitadiavana olona, fa raha tsy misy ny fikasana ny maka misy daty na ny fifandraisana 'ho zava-dehibe loatra’ satria ny lalao manaraka 'Mety ho tsara kokoa.’
Ny matihanina amin'ny aterineto matetika dater manana telo na mihoatra ny fahazarana manaraka ireto:
> Miresaka amin'ny olona mihoatra ny enina miaraka amin'izay koa,.
> Member ny telo na mihoatra amin'ny aterineto fiarahana amin'ny fanompoany tao amin'ny izany fotoana izany.
> Relists mombamomba azy ao 24 ora ny fifandraisana nisaraka.
> Mamela fotsiny ny fifandraisana maro 'farany’ mba hametraka ny fotoana ho fifandraisana vaovao.
> Taratasim-bola ary ny mampiaraka asa hafatra imbetsaka isan'andro.
> Dia mino fa foana ny lalao manaraka 'Mety ho tsara kokoa'.
> Imbetsaka isan-taona dia mihoatra ny iray manana daty, amin'ny olona isan-karazany, natsangana tao anatin'ny herinandro.
> Tamin'ny famantarana voalohany fahoriana amin'ny mety fifandraisana, mamela zavatra Romboty ary hiverina any an-tserasera mampiaraka.
> Enga anie manafina ny mombamomba, fa tsy mamafa izany, raha olona iray niaraka hatrany.
> Rehefa niverina avy amin'ny daty, taratasim-bola avy hatrany ny vaovao namany Sary hafatra avy amin'ny olon-kafa.
Ankapobeny, ny olona iray dia tsy hainareo ny hoe 'Te ho matihanina amin'ny aterineto dater’ dia hanaraka izany ho toy ny fiainana tanjona. Izany dia zavatra iray miforona vokatry ny fiarahana amin'ny aterineto olona traikefa. Izy / izy nahita ny 'mora’ izany dia ny hahazo daty vaovao ary nampahafantarina ny tarehy vaovao saika isan'andro. Eo anoloan'ny olona mahalala izany, izy / izy no miresaka amin'ny antsasaky am-polony (na mihoatra) ny olona tamin'izany andro izany. Raha misy daty no fandaharana tamin'ny olona iray mbola misy fanantenana miandry enina ao amin'ny olona ny Inbox rehefa / izy miverina avy any amin'ny daty. Izany, mifandimby, manomboka ny hamboly toe-tsain'ny subconscious fa ny olona manaraka dia mety ho 'tsara kokoa,’ noho izany dia mora kokoa ny handao ny fifandraisana na mampiaraka traikefa tamin'ny voalohany fahoriana famantarana fa tsy miasa amin 'ny alalan' ireo olana.
Ny matihanina amin'ny aterineto dia amin'ny ankapobeny dater hanafina ny profil oharina hamonoany rehefa niditra ho any an-mampiaraka manokana fifandraisana. Subconsciously, ny olona dia tsy tena manome ny misy azy 100% ny fifandraisana satria efa namoaka mora afaka lalana miverina any amin'ny planeta ny daty.
Matihanina amin'ny aterineto daters, kanefa tsy tonga saina izany, dia manana fiantraikany ratsy eo amin'ny olona tonga ao amin'ny nifandray nandritra ny fanafihana. Ohatra, ny matihanina amin'ny aterineto dia mety ho nanoratra dater olona fito miaraka amin'izay koa,, raha mahaliana vaovao iray hafa mampiseho ny fanantenana. Mifandimby, ny matihanina dater mamela ny fifandraisana amin'ny aterineto amin'ny iray (na mihoatra) ny ny olona fito hafa mijanona tampoka, nandao izany olona tsy valiny ary nanontany tena, 'Izay no izy / izy manjavona ny?’ Ny olana hafa daters matihanina amin'ny aterineto mitondra ny aterineto no mampiaraka ny fanoloran-tena tsy. Mety manana telo, efatra na fifandraisana bebe kokoa isan-taona. Ny fifandraisana amin'ny ankapobeny vetivety sy ny matihanina amin'ny aterineto dater no daty vaovao nilahatra (amin'ny olona vaovao izy / izy nihaona an-tserasera) ao anatin'ny andro maromaro ny hoavy?.
Ny olona iray izay manana telo na mihoatra toetran-matihanina dater aterineto dia mety tsy te-hiaiky fa izy / izy dia matihanina amin'ny aterineto dater, fa izany no dingana voalohany amin'ny famahana ny olana. Dingana hafa ho famahana ny olana ireo:
> Hamafa tanteraka ny mombamomba azy(s) rehefa nirotsaka an-fifandraisana. Tsy misy mijery indray, handroso ihany.
> Ankino-tena ho ny fifandraisanareo amin'ny tapa-kevitra ny hiasa mafy amin 'ny alalan' ny olana. Izay miasa amin'ny olana eo amin'ny fifandraisana no manampy ny olona mba hitombo. Mandositra dia tsy ny vahaolana.
> Raha miresaka amin'ny olona iray intsony, aza manao izany mangatsiaka Torkia. Raha kely indrindra dia mandefa izany olona iray mahalala fomba, mba fanamarihana / fantany ny antony. Ny olona dia hanaja anao kokoa noho izany.
> Mahita asa fanompoana mampiaraka an-tserasera iray izay tianao ary tsy hiala aminy. Tsy kilalao ny mahita fa maro ny olona vaovao ianao afaka mifandray amin'ny. Ny olona tsirairay izay mifandray amin'ny olona dia tena omban 'ny tena fihetseham-po. Aza hitarika azy ireo amin'ny.
> Ihany no mifandray amin'ny olona vitsivitsy amin'ny fotoana.
> Aza manaiky hianjera ao amin'ny toe-tsain'ny 'ny manaraka dia mety ho tsara kokoa.’ Fa tsy, hifantoka amin'ny olona ianao, ary mahafantatra fa miaraka izy ireo 'ny tsara indrindra'. Dia ataovy miasa.
Matihanina amin'ny aterineto daters tsy nahy ny olona maro naratra nandritra ny Mazava ho azy fa ny 'traikefa nahafinaritra'. Fa angamba inona ratsy dia matihanina amin'ny aterineto daters nampalahelo ny tenany satria tsy mianatra miasa amin'ny alalan'ny fifandraisana olana izay mamokatra fifandraisana maharitra fahombiazana. Soa ihany, amin'ny tapa-kevitra, matihanina amin'ny aterineto daters afaka manova ary rehefa napetrany toy izany koa mifantoka mafy amin'ny fifandraisana (tahaka ny nataony tamin'ny aterineto mampiaraka) dia ny fifandraisana amin'ny ankapobeny mivadika ho mahafinaritra sy maharitra traikefa. Ary izany dia mahatonga ny fahombiazana hafa tantara amin'ny olona roa izay nihaona an-tserasera.